လက်လီရောင်းချခြင်း၏ Digital အနာဂတ် - Vanguard
Home » လက်လီရောင်းချခြင်း၏ Digital အနာဂတ်
Posted by Vanguard on October 22, 2020 .
ဈေးဝယ်ထွက်ရာမှာ စတိုးဆိုင်သို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွား၍ ရွေးချယ်ဝယ်ယူခြင်းက အများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့သော်လည်း အွန်လိုင်းမှဈေးဝယ်ခြင်းဟာ လူအများကပိုမိုနှစ်သက်တဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ လျင်မြန်စွာပဲ ပြောင်းလဲလာပါတယ်။အလုပ်တွေ၊ ဝင်ငွေနဲ့ အပန်းဖြေချိန်တွေမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံလာရတာကြောင့် ကပ်ရောဂါကိုတုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့် consumer တွေရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် အွန်လိုင်းမှဈေးဝယ်ခြင်းကလည်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် သက်သာလွယ်ကူမှုများကြောင့် အားထားရတဲ့ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူမှုအကြိမ်ရေ နည်းသေးတဲ့ ဈေးဝယ်သူတွေကြားမှာပင်လျှင် eCommerceနဲ့ contactless (ထိတွေ့စရာမလို)တဲ့အရောင်းလမ်းကြောင်းတွေကို ရှေးရှုပြီး မကြုံစဖူးပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်ကို မျက်မြင်တွေ့ကြုံနေကြရပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့ကတော့ Digital နည်းဖြင့် လက်လီရောင်းချခြင်းဟာ လျင်မြန်စွာပဲ မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
Digital လက်လီရောင်းချမှုနည်းစနစ်တွေမှာ စနစ်တစ်ခုလုံးကို လုံးဝပြောင်းလဲစေမယ့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အလားအလာရှိပါတယ်။ စားသုံးသူတွေအတွက်ကတော့ AI မှစတင်ပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းအတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းနဲ့ အခြားရွေးချယ်စရာတွေအထိ မြင့်မားတဲ့ Digital နည်းပညာဖြင့် ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းအတွေ့အကြုဲံတွေ ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်လီရောင်းချသူတွေ အတွက်ကတော့ ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခွင့်ရစေဖို့၊ ဝန်ထမ်းတွေ ဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့၊ စတိုးဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို၊ အမှတ်တံဆိပ်တွေတိုးတက်စေဖို့နဲ့ အနာဂတ်မှာ ပြိုင်ဘက်တွေထက် သာလွန်စေရန် တည်ဆောက်ဖို့အတွက် နည်းပညာတွေကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် လက်လီရောင်းချသူကလည်းကွဲပြားတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံတွေကို စားသုံးသူတွေထံသို့ အရောင်းလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးပေါ်ကနေ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်စွမ်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ Omnichannel လက်လီmodel ကို တွန်းအားပေးနိုင်ဖို့ Digital နည်းဗျူဟာတွေမှာ အလားအလာရှိပါတယ်။ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းအတွေ့အကြုံမှာ Digital အရမွမ်းမံမှုတွေ ပိုမိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် လက်လီရောင်းချသူတွေဟာ မိမိတို့၏ဝယ်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအကြံပြုချက်တွေ၊ အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေအပါအဝင် အသုံးဝင်တဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ရယူနိုင်၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပိုမိုစုဆောင်းနိုင်ပြီး အမှတ်တံဆိပ်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့၏ဝယ်သူတွေကို ပိုမိုပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်တဲ့အဆင့်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Omnichannel Model ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ
Omnichannel business model ကို အသုံးပြုရာတွင် ရေတွက်လို့မရနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိပါသည်။ပထဆုံးအနေနဲ့ကတော့ omni channel model ဟာတကယ်ပဲ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့တော့ အောင်မြင်မှုရ ရှိစေဖို့ ပံ့ပိုးပေးမယ့် နည်းပညာအပေါ် အပြည့်အဝရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့ လက်လီရောင်းချသူတွေအတွက် ပြိုင်ဘက်တွေထက်သာလွန်စေမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဝယ်သူတွေရဲ့ စွဲမြဲစွာဝယ်ယူ အားပေးမှု တိုးလာအောင် Omnichannelရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေနဲ့ Digital နည်းပညာရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုဆောင်တဲ့ အနာဂတ်လက်လီရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာမှ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ Gartner ရဲ့ဆိုစကားအရ Omnichannel ရဲ့ဝယ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု နည်းဗျူဟာကိုသုံးတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ သူတိုရဲ့ ၈၉ရာခိုင်နှုန်းသော ဝယ်သူတွေကို အဆက်မပြတ် ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ခိုင်မာတဲ့ Omnichannel လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမော်ဒယ်တွေရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဟာဆိုရင် Digital solution တွေဖြစ်ပါတယ်။နည်းပညာအသစ်ကို မြတ်နိုးသုံးစွဲတဲ့ လက်လီရောင်းချသူတွေ၊ ဥပမာအားဖြင့် “Digital disruptors” တွေဟာ ယနေ့ခေတ်ရဲ့ ဈေးဝယ် ခြင်းအတွေ့အကြုံတွေမှာ ဝယ်သူတွေရဲ့အလိုအပ်ဆုံးတွေကို သက်တောင့်သက်သာ ပေးစွမ်းရာမှာ ဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်လာနိုင်မယ့် အမှတ်တံဆိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်သစ်စျေး၀ယ်သူတွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် လက်လီရောင်းချသူတွေအနေနဲ့ ဝယ်သူရဲ့ ဈေးဝယ်နည်းနဲ့ ဝယ်သူတွေအတွက် ဘယ်အရာကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာကို ပိုပြီးကောင်းမွန်စွာသိနားလည်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုဝယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိုးထွင်းအမြင်ရှိခြင်းဟာ မှန်ကန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေကို မှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာ တင်ဆက်ပြသနိုင်ဖို့သာ အရေးပါရုံတင်မကပဲ ဝယ်သူတွေက အွန်လိုင်း၊ လူကိုယ်တိုင်၊ မြို့တွင်းအိမ်အရောက်ပို့ဆောင်မှု (သို့) ကိုယ်တိုင်သွားယူခြင်း အစရှိတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေထဲကမှ ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းမျိုးကို ပိုပြီးရွေးချယ်လိုလဲဆိုတာကို နားလည်ဖို့လည်း ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
ဝယ်သူလမ်းကြောင်းကို နားလည်ခြင်းဟာ ခေတ်သစ်ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုရနိုင်တဲ့ အဓိကတွန်းအားများထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ စားသုံးသူတွေနဲ့ ဆိုင်တွေရဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုတွေဟာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ နည်းပညာဟာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ စားသုံးသူတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးထားခဲ့စဥ် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လက်လီရောင်းချသူတွေ ‌ခေတ်မီလာစေဖို့နဲ့ တိုးတက်လာစေဖို့အတွက် လမ်းကြောင်းသစ်တွေကို ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်သစ်စားသုံးသူတွေအတွက် DIGITAL TOOLS များ
iVend Cloud ဟာဆိုရင် cloud ကိုအခြေခံတဲ့ စီမံခန့်ခွဲ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲ ဝန်ဆောင်မှုမှာ hosted infrastructure မှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ enterprise-class လက်လီအရောင်းလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု application ဖြစ်တဲ့ iVend Retail 6.6 ရဲ့ omnichannel လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေ အကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီး ရရှိနိုင်ပါတယ်။
iVend Cloud ဟာ Microsoft Azure နဲ့ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီး host အဖြစ်ရယူထားပါတယ်။ Microsoft Azure ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးနဲ့ လုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံး cloud provider ဖြစ်ပြီး compliance offerings ပေါင်း ၉၀ ကျော်နဲ့ အခြား cloud provider တွေထက် ပိုမိုများပြားတဲ့ အချက်အလက် center တွေ နေရာဒေသအနှံ့အပြားမှာ ရှိနေပါတယ်။
iVend Cloud နဲ့ဆိုရင်တော့ လက်လီရောင်းချသူတွေဟာ ဘယ် Internet browser နဲ့မဆို လက်လီရောင်းချမှုစနစ်က လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အပြည့်အဝကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဈေးကွက်အတက်အကျများကိုလည်း အလိုက်သင့်တုံ့ပြန်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
iVend Cloud မှာအကုန်ပါရှိပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် iVend Cloud ရဲ့ဝယ်သူတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ လက်လီအရောင်းစီးပွားရေး၏ ရုံးခန်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပံ့ပိုးဖို့ အတွက်ကွန်ပြူတာ များနှင့် အဆောက်အအုံများကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန်မလိုအပ်ပါ။iVend Cloud ရဲ့ဝယ်သူတွေဟာ iVend Point of Sale ကိုရှိပြီးသား ကွန်ပြူတာမှာပင် Wi-Fi connection သုံးကာ iVend Cloud ပေါ်မှာပင်လွယ်ကူစွာ အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
iVend Cloud licensing တွင်အောက်ပါအတိုင်းပါဝင်ပါတယ်။
Application စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ဆောင်မှုတွေဟာ ပုံမှန် licensing တွင်ပါဝင်ပြီး၊ , လက်လီအရောင်းစီးပွားရေးအတွက် တိုးချဲ့ထားတဲ့အိုင်တီအဖွဲ့ဖြစ်လာတဲ့ iVend လက်လီရောင်းချခြင်း Application အဖွဲ့မှ လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စီမံခန့်ခွဲမှုအပြည့်အစုံကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့မှ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ကွန်ပြူတာတွေနှင့်ဆက်စပ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ ရယူနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဖယ်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Support365 Standard အပေါ်အခြေခံပြီး ၂၄နာရီလုံး ပံ့ပိုးsupport ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ရလဒ်တွေပေးပို့မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း
လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိ ခြင်း– Cloud ပေါ်မှာ လက်လီအရောင်းဆိုင်ထားရှိခြင်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရေးမှ ကုမ္ပဏီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို နေရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်းမှာ လှမ်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး တိုးတက်လာတဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ ဝယ်သူတွေအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရရှိလာနိုင်စေပါတယ်။
တိုးတက်လာတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ – Cloud ပေါ်မှ လက်လီရောင်းချခြင်းဖြင့် အမြန်နှုန်းနဲ့ ပေါ့ပါးသွက်လက်မှုကို တိုးစေပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုအကျိုးရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာအသုံးပြုနှုန်းများကို ရံဖန်ရံခါရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုးမြှင့်ထားတဲ့ လုံခြုံရေးစနစ် – လုံခြုံရေးစနစ်အထပ်ထပ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်း အပြင်သို့ပျံ့နှံ့နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးတဲ့ end-to-end encryptionဖြင့် ကုမ္ပဏီအတွင်းမှာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို လုံခြုံစွာနဲ့ပြောင်းရွေ့နိုင်ပါတယ်။
လက်လီရောင်းချခြင်းကို Cloud ပေါ်မှာ တွေ့ကြုံခံစားကြည့်လိုက်ပါ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ရလဒ်တွေရရှိစေဖို့ iVend Cloud ကနေ ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်ပါသလဲ? လက်လီရောင်းချသူ လုပ်ငန်းရှင်တွေမှ လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ဈေးသက်သာတဲ့ ပုံစံဖြင့် မိမိတို့၏ consumer များနဲ့ ဝန်ထမ်းများဆီသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအသစ်များကို ပေးပို့နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကို အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ iVend Cloud ကနေ SaaS မော်ဒယ်အသစ်ကို leverage ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
#iVend #SmartRetail #VanguardMyanmar